The MacBook Pro bartamihii 2012 waxaa mar hore loo tixgeliyey Vintage by Apple | waxaan ka imid mac
MacBookga laga bilaabo bartamihii 2012 waxaa mar horeba Apple u tixgeliyey Vintage
Wax kasta iyo dhammaanteenba waxay ina timaaddaa xilliga nalagu "gu dhawaaqo" sidii duug. Waxay igu dhacday markii ugu horeysay ee ilmo ii yeero mudane, inkastoo muhiimadu tahay sida aan dareemeyno gudaha iyo inaan sii wadno shaqada. Dhanka kale, marka ay timaado kombuyuutarrada, marka ay ku dhawaaqaan inaad duugowday (ka roon haddii ay tahay Vintage) wax yar ayaa ka haray in la sameeyo. Waxay u badan tahay in ay bilaabi doonaan inay ku ilaawaan adiga, in nidaamyada hawlgalka aysan hadda u ahayn nooca gaarka ah iyo in qaybaha dayactirku bilaabaan inay noqdaan kuwo gabaabsi ah. Taasi waa waxa ku dhacay bartamihii 2012 MacBook Pro taas Apple ayaa hadda ku dhawaaqday inay tahay Vintage.
Ma ahaan doonto ilaa Janaayo 31 marka ay si rasmi ah u gasho liiska, laakiin mar hore ayaa lagu dhawaaqay in ay noqon doonto oo ay noqon doonto badhtamaha 2012 MacBook Pro kaas oo kordhin doona liiska qalabka Apple. Maxay ahayd liiska mahadnaqa shaqada la qabtay laakiin taasi hadda waa laga fariisan karaa. MacBookga su'aashu waxay ahayd mid ka mid ah CD-ga. Alla wanaag, markaan qolkayaga ku haysanay taawar CD oo leh mowduucyo iyo ciyaaro kala duwan. Hadda taasi waxay nooga muuqataa mid duugowday oo soo jireen ah laakiin 10 sano oo kaliya ayaa laga joogaa.
MacBookgan ayaa la sii daayay Juun 2012. Sidaan sheegnay wuxuu ahaa moodelkii ugu dambeeyay ee CD/DVD ku dhex-yaalla wuxuuna sii socday ilaa Oktoobar 2016. Taasi waxay naga dhigeysaa inaan u maleyneyno in ilaa taariikhdaas CD-gu uu ahaa mid lagama maarmaan u ah nolosheenna. Waxay iga dhigtaa wax yar dawakhaad inaan ka fikiro. Runtii markaan maqaalkan qorayo waxaan ku arkay qaar ka mid ah CD-yada khaanadaha ku jira oo runtii aanan haysanin ama meel aan ku ciyaaro. Shaashad 13-inch ah, waxay farxad badan u keentay shirkadda iyo isticmaalayaasha.
Ahaanshaha taariikhda iibkeedii ugu dambeeyay ee 2016, waxaa loo tixgeliyaa Vintage iyadoo la raacayo shuruucda Apple. Maxaa u tixgelinaya qalabka sida? iyada oo in ka badan shan sano laga joogo markii ay joojisay iibinta. Xusuusnow in Vintage ay ka dhigan tahay ururinta Apple iyo ururinta macnaheedu waa qiimo badan. Halkaas ayaan kaga tagayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » MacBookga laga bilaabo bartamihii 2012 waxaa mar horeba Apple u tixgeliyey Vintage
Sida loo sii daayo booska Mac-gaaga